Sida loo beddelo astaanta Kmail (iyo codsiyada kale) ee ku jira qashinka (tray) | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waxaan jecelahay in miiskeygu leeyahay isku mid isla markaana qayb kasta oo ka mid ahi ay xidhiidh leedahay. Taasi waa sababta aan aad ugu xushmaynayo astaamaha, muuqaalka iyo wixii la mid ah.
Wax in badan iga fikirayay ayaa ahaa in aanan badali karin astaanta Kmail taas oo ku soo baxda saxanka nidaamka (saxaarad), iyo tan iyo markii aan isticmaalay mawduuc hal-ku-dheg ah, waxay umuuqatay mid aad u fool xun oo ay la socdaan inta kale.
para plasma Waxaan isticmaalayaa mawduuc la yiraahdo Aya, oo aan ku darsaday astaamaha saxaarada ee ka tirsan mowduuc kale oo la yiraahdo Helium, laakiin nasiib daro gabi ahaanba ma dhameystirna.
Runtii khaladka qoraha ma ahan, laakiin KDE, maaddaama codsiyada qaarkood aysan isticmaalin astaamaha laga helo /home/elav/.kde/share/apps/desktoptheme/ / icons /, kuwaas oo ah kuwa ka muuqda saxanka nidaamka. Tani waxay ku dhacdaa Kmail, Akregator iyo kuwa kale
Sideen ku xaliyaa?
Hagaag xalka kaliya ee aan helay wuxuu ahaa kuwan soo socda. Waxa aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah bedelka astaanta Kmail laga helay galka 22 × 22 / barnaamijyada ee dulucda astaanta ah ee aan ku isticmaaleyno KDE, by astaanta doorbidkeena.
Sida iska cad, waa la doorbidaa in la yiraahdo astaanta qaab ahaan .PNG oo waa 22px ballaaran oo dheer. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad keydiso astaanta asalka ah, haddii aan rabno inaan soo kabanno. Waana taas. Tani waa waxa qarsoodigaygu u egyahay hadda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Sida loo beddelo astaanta Kmail (iyo codsiyada kale) ee ku jira nidaamka (tray)
Waxay umuuqataa mid weyn! : AMA
Waxay umuuqataa mid fiican, laakiin aaway kuwii wax furey? Waxaan rabaa in aan wax ka waydiiyo mowduuca, ma taqaanaa sida loo beddelo cabbirka astaamaha ku jira meelaha meelaha?
Waa maxay nooca KDE ee aad isticmaasho? 4.8, astaamahan si otomaatig ah ayaa loo beddelay iyadoo ku xiran ballaca guddiga. Waxaa loo maleynayay inay dhibaato tahay oo 4.9 iyaga ayaa la daayay. Qof ayaa furey cilad, maxaa yeelay wuxuu rabaa xalka 4.8 gadaal, waxaana loogu jawaabey in 4.10 ay jiri doonto ikhtiyaar ah in kor u qaadista / curyaaminta si otomaatig ah ee astaamaha kujira gudigaas.
Jaw ku jawaab
Waa inuu noqdaa galka 16 folder 16
Waxaan sugi doonaa nooca 4.10. waad ku mahadsantahay kaalmadaada
Miiska caadiga ah ee qaabkeyga.
Dhadhan fiican, fudud oo yar.
Salaan iyo mahadsanid wax ku biirinta.
Miiskaaga ayaa fiican!
Waxaan ku weydiinayaa Elav, miyaad isticmaaleysaa BE: Shell ama Plasma? Sababtoo ah waan jeclaaday dulucdaas, waxay leedahay taabasho cusub. ; D
Haddii aanan khaldamin, wuxuu adeegsanayaa Plasma, laakiin aan sugno illaa berri uu yimaado oo noo sheego waxa uu runtii yahay HAHA
Inta aan maraayo KDE-Look, haddii aan heli karo.
Qoraalka waxaan ku xusay cinwaanka mowduuca plasma maxaan isticmaali jiray 😛
aad u xiiso badan 🙂
Pirmitime samee sixitaan:
Rasmi ahaan astaamaha saxaaraddu maahan faylasha PNG laakiin waa faylasha SVG si loogu oggolaado xoogaa dabacsanaan ah iyada oo aan lumin tayada.
Hada runtii sifiican ayaan u garanayaa desktop-ka oo astaamuhu aad ayey ugu fiican yihiin saxaarada, aad ayey uxun tahay inuu ku dhex wareego shaashadda ... -.-
+1 iyo salaan!
Dhab ahaan, waa astaamo ku jira qaab .svg ama .svgz waligey si kale kuma dhihin. Waxa dhacaya ayaa ah xitaa in la dhigo astaan ​​la yiraahdo Kmail.svg, qaabkaas, gudaha galka sanduuqyada calaamadaha, ma muuqato, marka waa inaan ku daro liiska astaamaha aan isticmaalayo, oo kiiskan, ay yihiin gudaha .png 😀
PS: Wareegtada molaaaaa
Barnaamijyada bash - qaybta 1